Chọpụta ihe nlereanya iPhone
Ọtụtụ mgbe, a na-enye ndị mmadụ onyinye ma ọ bụ gbaziri ekwentị site n'aka Apple, nke ha na-achọ ịmata ụdị ihe nlereanya ha. E kwuwerị, ọ dabere na ngwa ndị ị ga-agba ọsọ, àgwà na ike nke igwefoto, nhazi ihuenyo, wdg. IPhone Model Ịchọta nke iPhone dị n'ihu gị adịghị ike, ọbụna ma ọ bụrụ na ị zụrụ ya n'onwe gị.
YouTube maka iPhone
Taa, YouTube bụ bọọlụ vidio kachasị ewu ewu n'ụwa, nke ụfọdụ ndị ọrụ na-eji edochi anya TV, na ndị ọzọ - ụzọ maka ego ebighi ebi. Ya mere, taa, ndị ọrụ nwere ike ịlele vidiyo nke ndị na-ede blọgụ ha kachasị amasị na iPhone site na iji ngwa ngwa nke otu aha ahụ.
Nyochaa ihe osise kachasị mma maka iPhone
The iPhone bụ ngwaọrụ nke aghọwo ihe itunanya na foto mkpanaaka. Ọ bụ ngwaọrụ Apple nke gosipụtara na ihe oyiyi dị elu nwere ike ịmepụta ọ bụghị nanị na ngwa ọrụ, kamakwa site na smartphone nkịtị, nke bụ mgbe niile n'akpa gị. Ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ foto ọ bụla dị na iPhone bụ n'ezie ka ọ dị - ọ dị mkpa ka mma n'ime otu n'ime ndị editọ foto, nke anyị ga-atụle n'isiokwu a.
Esi lelee ndebanye aha iPhone
N'ihe ọ bụla ngwa nke e kesara na Store Store, e nwere ịzụta ihe n'ime ụlọ, mgbe e nyere gị ego a ga-akwụ ụgwọ site na kaadị akụ nke onye ọrụ na oge ụfọdụ. Chọta ndebanye aha ọma na iPhone. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya otú a ga-esi mee nke a.
Otu esi emekọrịta iPhone na kọmputa
N'adịghị ka ngwaọrụ gam akporo, ịmekọrịta iPhone na kọmputa chọrọ software pụrụ iche, site na nke ị nwere ike ijikwa ekwentị gị, yana mbupụ na mbubata ọdịnaya. N'isiokwu a anyị ga-eleba anya iji mekọrịta iPhone na kọmputa site na iji mmemme abụọ a ma ama.
Esi emeghe mkpọchi mmechi na iPhone
Mkpọchi mmechi bụ ngwá ọrụ na-echebe gị smartphone site ntinye aka na ntọala ntọala. Dịka, a na-enye ọnọdụ a site na ihe nchọgharị ma ọ bụ ngwaọrụ Apple ọzọ, na-enye gị ohere ichedo ekwentị gị na ozi echekwara na ya site na ndị ọzọ. Chee echiche banyere ọnọdụ a: e meghachiri iPhone ahụ nke ọma na onye nwe ya, ma mkpọchi mmechi ahụ ka dị.
Otu esi gbanye iPhone
Ebe ọ bụ na Apple na-agbalị mgbe nile iji ngwaọrụ ha dị mfe ma dị mfe dịka o kwere mee, ọ bụghị naanị ndị ọkachamara ahụmahụ, kamakwa ndị ọrụ na-achọghị iji ọtụtụ awa chọpụta otú ha si eme na ihe na-arụ ọrụ maka ha, ṅaa ntị na smartphones nke ụlọ ọrụ a. Otú ọ dị, ajụjụ mbụ ga-ebili, nke a bụ ihe nkịtị.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ezigaghị ozi site na iPhone
Site n'oge ruo n'oge, iPhone ọrụ na-eche nsogbu mgbe ị na-ezipụ ozi SMS. N'ọnọdụ dị otú ahụ, dịka iwu, mgbe a gbanwere ya, akara ngosi nwere akara mkpuchi uhie gosipụtara na-esote ihe odide ahụ, nke pụtara na ewepụtaghị ya. Anyị ghọtara otu esi dozie nsogbu a. Ihe mere iPhone anaghị eziga SMS-ozi N'okpuru, anyị na-atụle ndepụta nke isi ihe ndị nwere ike ime ka nsogbu dị mgbe ị na-eziga SMS-ozi.
Viber maka iPhone
Taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iPhone ọ bụla nwere ọ dịkarịa ala otu nzi ozi ozugbo. Otu n'ime ndị nnọchianya kachasị mma nke ngwa ndị dị otú a bụ Viber. Na n'isiokwu a anyị ga-atụle maka uru ọ bịara bụrụ nke a ma ama. Viber bụ onye ozi ozugbo na-eji njikọ Ịntanetị iji mee ka olu, oku vidiyo na ozi ederede.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na mmiri abanye na iPhone
The iPhone bụ ngwaọrụ dị oké ọnụ ahịa nke chọrọ nlekọta anya. N'ụzọ dị mwute, ọnọdụ dị iche iche, otu n'ime ndị na-enweghị obi ụtọ bụ mgbe ama amaba n'ime mmiri. Otú ọ dị, ọ bụrụ na imee ya ozugbo, ị ga-enwe ohere iji chebe ya site na mmebi mgbe mmiri wetasịrị. Ọ bụrụ na mmiri abanye n'ime iPhone Malite na iPhone 7, smart Apple smartphones nwere n'ikpeazụ nwetara nchebe pụrụ iche megide mmiri.
Esi gbanyụọ mpempe aka-rotate na iPhone
Ekwentị ọ bụla, gụnyere iPhone, nwere ihuenyo-akpaaka na-akpagharị, ma mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike imebi ya. Ya mere, taa, anyị na-atụle otu esi agbanyụ mgbanwe nhazi ihuenyo na iPhone. Gbanyụọ-akpagharị na-emegharị na iPhone Nchekwa onwe-ntụgharị bụ njirimara nke ihuenyo na-agbanwe na-akpaghị aka site na eserese na ọnọdụ ihuenyo mgbe ị na-agbanwegharị ekwentị site na nkwụsịtụ na nkwụsị.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na iPhone anaghị enweta netwọk
The iPhone bụ ngwaọrụ na-ewu ewu nke na-enye gị ohere ịnweta njikọ. Otú ọ dị, ị gaghị enwe ike ịkpọ, zipụ SMS ma ọ bụ gaa na Ịntanetị ma ọ bụrụ na ozi "Search" ma ọ bụ "Enweghị netwọk" gosipụtara na akara ọnọdụ. Taa, anyị ga-atụle otú ị ga-esi nọrọ n'ọnọdụ a. Ihe kpatara enweghị njikọ na iPhone Ọ bụrụ na iPhone kwụsịrị ịnweta netwọk, ọ dị mkpa ịghọta ihe kpatara nsogbu dị otú ahụ.
Esi gbanyụọ LTE / 3G na iPhone
3G na LTE bụ ụkpụrụ ntanetị data na-enye ohere ịnweta Internet mkpanaka ọsọ ọsọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, onye ọrụ ahụ nwere ike ịchọ ịmachi ọrụ ha. Taa, anyị ga-ele anya otú a ga-esi mee nke a na iPhone. Gbanyụọ 3G / LTE na IPhone Meechibido ịnweta usoro data ntanetụ ọsọ ọsọ na ekwentị n'ihi na onye ọrụ nwere ike ịchọrọ maka ihe dịgasị iche iche, otu n'ime ihe kachasị mkpa bụ ịchekwa ike batrị.
Ndị ahịa nke atọ ndị ahịa VKontakte mode "Anya" maka iOS
VKontakte bụ ọrụ na-ewu ewu nke ọha na eze, ndị mmepe nke na-eme ka ndị ọrụ nwee ike ịmebata mmemme ọhụrụ, ma ọ bụghị maka otu - offline mode. Ma dị mma, maka ndị nwe iPhone, ngwa ndị pụrụ iche dị maka nleta na ọrụ na-apụtaghị n'Ịntanet. Nri nri Swing A ngwa ngwa maka ịrụ ọrụ na VKontakte, nke ga-eme ka ị nọrọ na ndò nke ndị ọrụ ndị ọzọ nke netwọk mmekọrịta.
Ihe ịkụ nzọ egwuregwu maka iPhone
Ghọta egwuregwu ahụ, dị ka igwu egwu ma merie? Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ iPhone, ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ngwa na-enye gị ohere ịbanye na egwuregwu dị iche iche. Liga Stavok Ụlọ ọrụ ịkụ nzọ nke Russia kasị ukwuu nwere ikikere kemgbe 2009. Na Njikọ Betting maka iPhone, ị nwere ike iji ihe ọ bụla dịka dị na ntanetị nke ọrụ ahụ: ozi mgbasa ozi (gụnyere nkwado vidio), egwuregwu dịgasị iche iche, ịkụ nzọ dị na ntanetị abụọ na ihuenyo, ịmụ nkwụsịtụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Esi emechi ngwa na iPhone
Onye obula onye ozo nke ozo na - arusi otutu ngwa di iche iche, ma, o doro anya, aj ujua na-achota otu esi emechi ha. Taa, anyị ga-ele anya otú e si eme ya. Ngwa ngwa na iPhone
Wepu ụdaolu site na iPhone
Ndị ọrụ na-arụnye ụdị egwu ma ọ bụ ụda dị iche iche iji gbanye mgbanaka ha. Olu ụda a na-agbanyere na iPhone dị mfe ihichapụ ma ọ bụ gbanwee na ndị ọzọ site na ụfọdụ mmemme na kọmputa gị. Iwepu ụdaolu site na iPhone Ịnwere ike wepu ụdaolu site na ndepụta nke ụdaolu dịnụ site na iji kọmputa na ngwanrọ dịka iTunes na iTools.
Esi weghachi ọnọdụ modem na iPhone
Ọnọdụ modem bụ akụkụ pụrụ iche nke iPhone nke na-enye gị ohere ịkekọrịta netwọk Ịntanetị na ngwaọrụ ndị ọzọ. N'ụzọ dị mwute, ndị ọrụ na-echekarị nsogbu nke mberede nke ihe omume a. N'okpuru ebe a, anyị ga-eleba anya iji dozie nsogbu a. Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na modem okpu na iPhone Iji mee ka ọrụ ọrụ nkesa Ịntanetị rụọ ọrụ, a ghaghị ịbanye na iPhone.
Esi nyefee vidiyo site na iPhone na iPhone
Imirikiti ndị ọrụ Apple nwere foto na vidiyo echekwara na ngwaọrụ ha na ụdị ntanetịime. Usoro a na - enye ohere ọ bụghị naanị iji hụ nchekwa ọdịnaya, ma n'oge ọ bụla iji kesaa ya na ndị ọzọ nwere ngwa apụl. Karịsịa, taa, anyị ga-elebakwu anya na otu ị ga-esi jiri ọsọ ọsọ na-ebufe vidiyo site n'otu iPhone gaa na ọzọ.
Otu esi emepe faịlụ ZIP na iPhone
Na usoro nke na-arụ ọrụ na iPhone, onye ọrụ ahụ nwere ike ịchọ ka ya na ụdị faịlụ dịgasị iche iche na - emekọrịta ihe, gụnyere ZIP - usoro a na-ewu ewu maka nchekwa na nchịkọta data. Taa anyi ga ele anya ot 'esi meghee ya. Mepee faịlụ ZIP na iPhone Ịnwere ike ịdipụ faịlụ ZIP site na ịmepe ọdịnaya edepụtara na ya site na iji mmemme pụrụ iche.